किन रिसाइन् अनुष्का ? बलिउड अभिनेत्री अनुष्का शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफ्नो रिस पोखेकी छन्। उनको रिस फोटोग्राफर र मिडिया हाउससँग थियो। चर्चित क्रिकेट खेलाडी विराट कोहलीसँग बिहे गरेकी अनुष्का गर्भवती भएपछि भारतीय मिडियाहरु निकै सक्रिय भएर उनको पछि लागेका छन्। त्यसको रिस उनले पोखेकी हुन्। बिहीबार, पुस २३, २०७७
को कलाकारले कसलाई गरे फलो? फोटो सेयरिङको लागि सजिलो माध्यम हो, सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राम। नेपालका अधिकांश कलाकारले यसमा खाता खोलेका छन्। यहाँ हामी उनीहरुका फ... बुधबार, पुस २२, २०७७
साँच्चै पुनर्मिलन भएकै हो काइली र ट्राभिसको ? छुट्टिएको एक वर्षपछि मोडल तथा व्यापारी काइली जेनर र र्‍यापर ट्राभिस स्कटबीच पुनर्मिलन भएको सार्वजनिक भएको छ। काइलीले सन् २०१९ को अक्... शनिबार, पुस १८, २०७७
पति र पुत्रसँग करिनाको मस्ती नायिका करिनाले तस्बिरको कयाप्सनमा 'दुई केटाहरुसँग मस्ती गर्ने कोसिस गरिरहेको पर्फेक्ट तस्बिर' लेखेकी छन्। साथै यी दुई मायालु बिना २... बिहीबार, पुस १६, २०७७
प्रियंका चोपडाले ४० टेकमा पनि पर्फेक्ट सट नदिएपछि... फिल्मी क्षेत्र नै यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ कुनै न कुनै गसिपले ठाउँ पाइरहेको हुन्छ। अहिले भारतीय चर्चित अभिनेत्री प्रियंका चोपडाको एक प... शनिबार, मंसिर ६, २०७७
नाम फेरेर चर्चित बनेका यी बलिउड अभिनेत्री, पहिले के नामले चिनिन्थे? बलिउडमा कैयौं यस्ता अभिनेता छन् जो फिल्ममा आउनुभन्दा पहिला अर्कै नामले चिनिन्थे। अक्षय कुमारको असली नाम ओम भाटिया हो। टाइगर श्राफको... शनिबार, कात्तिक ८, २०७७
ओस्कारविजेता नै पाउँदैनन् बलिउडमा काम भारतीय चलचित्रकर्मीहरुले एकपछि अर्को गर्दै बलिउडबाट आफू पीडित भएको खुलासा गर्न थालेका छन्। ओस्कार विजेतासंगीतकार एआर रहमानले आफूविरु... मंगलबार, साउन १३, २०७७
विवाहको पाँचौं वर्षगाँठमा शाहिद कपूरलाई मिराले बताइन् सुखी जीवनको यस्तो रहस्य मीराले पोस्टमा लेखेकी छन् '५ साल, ४ आत्मा, ३ घर, २ सन्तान र एक परिवार। मेरो प्यारो जिन्दगीको यो यात्रामा तिमी बाहेक कोही छैन, जसलाई... बुधबार, असार २४, २०७७
भुवन–साम्राज्ञी वाकयुद्ध‚ साम्राज्ञी भन्छिन्- प्रहरी केस हुनसक्ने तहको दुर्व्यवहार भएको थियो फिल्म क्षेत्रमा यतिबेला आरोप–प्रत्यारोपको शृंखला चलेको छ। बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतले आत्महत्या गरेपछि सल्किएको अपमान, नाताव... सोमबार, असार १५, २०७७
लकडाउन उल्लंघन गर्दै पार्टीमा दीपक-दीपा, सञ्चारकर्मी रविले दिए साथ अहिलेको कोरोना महामारीको बेलामा लकडाउनको पालना अनि सामाजिक दूरी कायम गराउन सर्वसाधारणलाई उत्प्रेरित गर्न सेलिब्रिटीहरुको भूमिका महत्... बुधबार, वैशाख ३१, २०७७
कमेडियन भारतीले ‘हम तुम और क्वारेन्टाईन’ बनाउने भारतमा कोरोना संक्रमणका कारण लकडाउन अवधि बढेपछि भारतकी चर्चित स्ट्यान्डअप कमेडियन भारती सिंहले जुक्ति निकाल्दै अब घरमै नयाँ कमेडी सि... आइतबार, चैत ३०, २०७६
डिपनेक ड्रेसमा कैटी पेरीको स्टायलिस लुक्स चर्चित गायिका केटी पेरी अहिले गर्भावस्थामा रमाइरहेकी छिन्। ओरनाल्डो ब्लुकबाट पहिलो बच्चाकी आमा बन्दै गरेकी उनी निक्कै खुसी छिन्। बिहीबार, चैत २०, २०७६
डिभोर्स गर्दै मेघा–सिद्धान्त भारतीय टेलिभिजन स्टार मेघा गुप्ताले श्रीमान् सिद्धान्त कार्निकसँग डिभोर्सको निर्णय गरेको सार्वजनिक भएको छ। उनीहरुले चार वर्ष अगाडि म... शुक्रबार, फागुन ३०, २०७६
कियारा आडवाणीको 'सिम्बा' प्रेम बलिउड एक्टेरेस कियारा आडवाणी अहिले फिल्म भुलभलैया २ को सुटिङ्मा ब्यस्त छिन्। यसमा उनको अपोजिट छन् कार्तिक आर्यन। उनले अक्षय कुमार, द... बुधबार, फागुन २८, २०७६
स्तन बढाउने बलिउडका सुन्दरीहरू : कंगनादेखि शिल्पासम्म सुन्दरतासँगै आफ्नो बजार भ्यालु हुने भएकाले हलिउड र बलिउडका कलाकारले सरोगेसीमात्रै होइन प्लास्टिक सर्जरी समेत गर्ने गरेका छन्। अधिकां... मंगलबार, फागुन २७, २०७६
शाहरुखकी छोरीलाई इन्स्टाले दियो ब्लु टिक‚ बलिउड प्रवेश गर्ने हल्ला एकाउन्ट पब्लिक भएसँगै इन्स्टाग्रामले एकाउन्टलाई ब्लु टिक मार्क आएको छ। सुहानाका प्रशंसकका लागि यो खुशीको कुरा हो। बलिउड डेब्युभन्दा... सोमबार, फागुन २६, २०७६
कोरोनाले रोक्यो करिष्माको घरमा आयोजना हुने भव्य होली यसपल्ट एकै ठाउँमा भेला भएर रङ दल्न र रमाइलो गर्न नपाएको उनले फेसबुकमा उल्लेख गरेकी छन्। उनले सामाजिक सञ्जालबाटै शुभकामना आदानप्रदान... सोमबार, फागुन २६, २०७६